DAAWO SAWIRRO: Odayaasha Koonfur Galbeed oo go’aan ka qaatay in la dhimo tirada Baarlamaanka (Sidee ku timid?) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Odayaasha Koonfur Galbeed oo go’aan ka qaatay in la dhimo...
DAAWO SAWIRRO: Odayaasha Koonfur Galbeed oo go’aan ka qaatay in la dhimo tirada Baarlamaanka (Sidee ku timid?)
Baydhabo (Halqaran.com) – Odayaasha Dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa Arbacadii maanta isu raaceen in tirada Xildhibaanada Baarlamaanka Koonfur Galbeed laga yareeyo intii hore.
Odayaasha Dhaqanka oo maanta kulan ku yeeshay Magaalada Baydhabo ayaa waxay kaga hadleen soo xulista Xildhibaanada Baarlamaanka cusub ee Koonfur Galbeed, maadaama kan iminka jira uu waqtigiisu dhamaaday.
Sidoo kale, Odayaasha Dhaqanka ayaa isku raacay in tirada Xildhibaanada Baarlamaanka laga dhigo 95 xubnood, halkii uu horey uga ahaa 149 mudane.
Afhayeenka Odayaasha Dhaqanka Koonfur Galbeed, Malaaq Maxamed Yacquub (Malaaq Deerow) oo gebagabadii kulanka la hadlay Warbaahinta ayaa ku dhawaaqay go’aanka Odayaasha Dhaqanka, ee ku aadan in tirada Xildhibaanada Baarlamaanka cusub ee Koonfur Galbeed laga dhigo 95 xubnood.
Go’aanka Odayaasha Dhaqanka ayaa wuxuu daba socdaa hadalkii dhawaan ka soo yeeray Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ee ahaa in tirada Baarlamaanka cusub laga dhigi doono 95 xubnood.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya, Cabdi Maxamed Sabriye oo bartamihii bishan gaaray Magaalada Baydhabo ayaa sheegay in dhawaan la bilaabi doono soo xulista Xildhibaanada Baarlamaanka cusub ee Koonfur Galbeed, ka dibna la qaban doono Doorashada Guddoonka Baarlamaanka.
dhimista tirada xildhibaanada baarlamaanka
Odayaasha Koonfur Galbeed oo isku raacay